Amin'ny tranga maro, ny sarin-tsary dia tsy mitaky teny iray na roa hamaritana. Amin'ny toe-javatra sasany, na izany aza, ny naoty ilaina dia misy fehezanteny roa na maromaro. Noho izany, ny fampiasana ny soratra amin'ny andalana iray dia tena tsy mihetsika. Izahay kosa mampiasa text-line andalana. Ity safidy ity dia ahetsika miaraka amin'ny bokotra mifanitatra izay azo jerena ao amin'ny andiany "Text" amin'ny tabilao "Annotate", ary ao amin'ny vondrona "Annotation" amin'ny tabilao "Start". Ary, mazava ho azy, baiko mifandray, dia "Textom". Raha vao mavitrika, ny fibaikoana dia mangataka ny hanaovantsika eo amin'ny efijery ny varavarankely izay hametra ny fehezan-dahatsoratra misy tsipika marobe, izay mamorona, toy izany koa, ny fitenin'ny mpanova teny kely. Hevitra iray izay nohamafisina raha ampiharinay ny fitaovana izay ampiasaina amin'ny famolavolana ny lahatsoratra, izay, ka ampitovina amin'ny fiasa miaraka amin'ny hohozotoana mifanila amin'ny felona.
Ny fampiasana ny "Multiple Line Editor" dia tena tsotra ary mitovy amin'ny fanitsiana amin'ny teny hoe misy processor, izay fantatra be dia be, ka arakaraky ny mpamaky ny hiasa miaraka amin'ireto fitaovana ireto. Aza adino fa ny tsipika "Text format" dia manana ny menaka midina miaraka amin'ny safidy fanampiny. Tokony holazaina ihany koa fa ny fanitsiana tohan-dahatsoratra maromaro mampiasa ny baiko mitovy ho an'ny lahatsoratra misy andalana (Ddedic), azontsika atao ny mamerina avo roa heny amin'ny zavatra an-tsoratra ihany, ny fahasamihafana dia ny fisokafan'ny mpanonta ity. izay atolotray eto, ary koa ny tab-doko momba ny "Text Editor" ao amin'ny tadiny. Ary farany, raha toa ka misy andalana maromaro ny tohan-dahatsoratra iraisan-dahatsoratra maromaro ataonao dia tsy maintsy apetrakao ny mari-pamantarana (toy ny indentations, spacing line ary fanamarinana), amin'ny alàlan'ny boaty fifampiresahana amin'ny anarana mitovy.
Previous Post«Previous 8.3 Text Styles
Next Post Tables 8.5manaraka »